DTG → Direct To Garment ပုံနှိပ်ခြင်းသည်ခေတ်မီသောတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်
DTG ပုံနှိပ်ခြင်း - တိုက်ရိုက်အလှဆင်ခြင်း၏ခေတ်မီနည်းလမ်း
DTG ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် "Direct To Garment" သည် ခေတ်သစ်နည်းလမ်း အထည်နှင့်အဝတ်အစားကိုတိုက်ရိုက်အလှဆင်။ DTG နည်းစနစ်သည်သင့်အားဝါဂွမ်းနှင့်ဝါဂွမ်းများတွင်မည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကိုမဆို elastane / viscose နှင့်ရောနှော။ ခွင့်ပြုသည်။ ဂရပ်ဖစ်အထူးပရင်တာကိုအသုံးပြု။ ဖန်တီးနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိပစ္စည်းကိရိယာများသည်ပရင်တာ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ဖြစ်သည် အစ်ကို GTXpro Bulkသော, စက်မှုအကြီးအကဲများမှကျေးဇူးတင်စကား, အလျင်အမြန်ပစ္စည်းပေါ်သို့ print ထုတ်။ DTG နည်းစနစ်ဖြင့်ပုံနှိပ်နိုင်သည် အရောင်အကူးအပြောင်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအရောင်မျိုးပွား။ စီမံကိန်းတစ်ခုပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည် တ ဦး တည်းအပိုင်းအစကနေ.
DTG နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ T-shirt တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ခြင်း
DTG ပုံနှိပ်ခြင်း၏သက်တမ်းသည်ဒြပ်စင်များစွာပေါ်မူတည်သည်။ ပထမ ဦး စွာမော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏ parameters များကို - ပစ္စည်းအသစ်များ, ပို။ ပို ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေး နှင့် ထွက်နိုင်ရေး။ ကြာရှည်ခံမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအခြားအချက်များမှာအသုံးပြုသောသုတ်ဆေးအမျိုးအစားများ၊ ပုံနှိပ်ထားသည့်အထည်နှင့်အလုပ်သမားများ၏ကျွမ်းကျင်မှုများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Brother GTXpro Bulk ပရင်တာကဖြစ်နိုင်သည် အများဆုံးအရွယ်အစား ၄၀.၆ စင်တီမီတာ၊ ၅၃.၃ စင်တီမီတာရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်လျှော့ချခြင်းကြောင့်စက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အလုပ်တွင်ပြတ်တောက်ခြင်းများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးခေါင်းအမြင့်သည်ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်စေရုံသာမက၊ လမ်းခွဲသူသည်ခေါင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အချိန်တွင်သာမက Head နှင့် feeder ကြားရှိအကွာအဝေးကိုလည်းအထိခိုက်မခံသောကြောင့်၎င်းသည်ပုံနှိပ်အရည်အသွေးကိုအမြဲအာမခံပေးသည်။ nozzles အရေအတွက်များပြားလာသောတိုးတက်လာသောအဖြူရောင်မှင်ခေါင်းအသစ်သည် ၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်သောပုံနှိပ်စက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အတွက်အမိန့်အပြောင်းအလဲမြန်သည့်ကာလသို့ဘာသာပြန်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော DTG ပုံနှိပ်ခြင်း
DTXpro Bulk ပရင်တာအသစ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အလွန်အမင်းစွယ်စုံပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စွမ်းရည်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အကြီးစားအော်ဒါများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စတိုးဆိုင်များနှင့်အေဂျင်စီများGTXpro သည်စတိုးဆိုင်များ၊ ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကလပ်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်ဌန်စာပြင်ဆင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ DTG နည်းပညာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကျစ်လစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဂိုဒေါင်ကိုကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည် တီရှပ်များ သူ့နာမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကြော်ငြာအိတ်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူဖိနပ်။ စိတ် အသုံးပြုသူ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည် အပြုသဘောပုံရိပ်နှင့်ယုံကြည်မှုတိုး.
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တီရှပ်များပေါ်တွင် DTG ပုံနှိပ်ပါ
GROUP နှင့်တစ် ဦး ချင်းဆုကြေးဇူးများအတွက်စိတ်ကူး: ခရစ်စမတ်၊ အီစတာ၊ ဂျူလိုင်၊ အောင်မြင်မှု၊ မိခင်များနေ့သို့မဟုတ်ကလေးများနေ့တို့သည်ရံဖန်ရံခါလက်ဆောင်များကိုပြင်ဆင်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးသောပွဲများဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၊ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့် - စိတ်ထင်မြင်ချက်ပိုကောင်းရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်။ ဝန်ထမ်းများအတွက်ကုမ္ပဏီလက်ဆောင်များ သို့မဟုတ်အဖြစ်ရတုလက်ဆောင်များ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆု ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်း ပုံရိပ်နွေး။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လက်ဆောင်များ၊ အထူးသဖြင့်လက်တွေ့ကျသောလက်ဆောင်များ၊ ဥပမာကုမ္ပဏီ၏တည်ရှိမှုအနှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်လက်သုတ်ပုဝါများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်ရရှိသောဆုအမှတ်သင်္ကေတနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသည့် gadget တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ မိတ်ဖက်များနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအတွက် အတွက် ကုမ္ပဏီ၏အနေအထားကိုအလေးထားပါ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆန့်ကျင်.
အပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်စုံတစ်ခုမှပုံနှိပ်ခြင်းသည်အထူးနေ့တွင်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်မူရင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဖွင့်ပေးသည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းတို့ဖြင့်ဖန်တီးထားသည့်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြင့်ဂုဏ်ပြုခံရသည့်တစ် ဦး ချင်းဆက်ဆံရေးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အမှတ်ရဖွယ်အမှတ်တရများဖြစ်စေနိုင်သည်။ GTXpro သည်သင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အမိန့်ပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်စီးပွားရေးအရတုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
DTG ပုံနှိပ်ခြင်းသည်စီမံကိန်းပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအားသာချက်များဖြစ်သောမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာပန်း) ။ ၎င်းကိုအလိုလျောက်ချိန်ညှိရမည့် client file မှတိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောအပိုင်းအစတစ်ခုမှပုံနှိပ်နိုင်သည် စမ်းသပ်ပုံနှိပ် ပိုကြီးတဲ့ပမာဏမချခင်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပုံနှိပ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည့်အမြင့်ဆုံး resolution ရှိရန်အရေးကြီးသည်။
ရေရှည်တည်တံ့မှုဒါဟာကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲ မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုဒါကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်လုပ်လျှင်။ ပိုမို၍ စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုအတွက်တိုးတက်မှုအသစ်များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည် ပုံနှိပ်ခြင်း၏အတော်လေးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုဝါဂွမ်းသို့မဟုတ် viscose တစ်ခုရောနှော, ဒါမှမဟုတ် elastane နှင့်အတူဖြစ်သင့်သည်, ဒါပေမယ့်သူကသိပ် stretchy မအရေးကြီးသည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြာရှည်စွာခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အကူအညီကြောင့်သင်သည်အလှဆင်ခြင်းပုံစံကိုညှိနိူင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှအသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ဆိုင်.
DTG ပုံနှိပ်ခြင်းအဝတ်အစားပေါ်ပုံနှိပ်အိတ်ပေါ် DTGစျေးပေါသော DTGပုံနှိပ်နှင့်အတူ gadgetsပုံနှိပ်ထားသောတီရှပ်များတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်ကျောက်စာ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကုမ္ပဏီလိုဂိုပုံနှိပ်ချွေးထွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ပါတီရှပ်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ဖြစ်ရပ်အတွက် T- ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်ပုံနှိပ်အဝတ်အစားပေါ်ပုံနှိပ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာအဝတ်အစားအပေါ်ပုံနှိပ်တီရှပ်များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်အိတ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းမှပုံနှိပ်စမ်းသပ်ပုံနှိပ်ဓာတ်ပုံပုံနှိပ်ခြင်းယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ဆုန်ထမ်းများအတွက်ပုံနှိပ်နှင့်အတူအဝတ်အစားအဖွားအတွက်လက်ဆောင်အဘိုးအတွက်လက်ဆောင်မိန်းမအတွက်လက်ဆောင်မေမေအတွက်လက်ဆောင်လူအတွက်လက်ဆောင်သူငယ်ချင်းအတွက်လက်ဆောင်သူငယ်ချင်းအတွက်လက်ဆောင်အစ်မအတွက်လက်ဆောင်အဖေအတွက်လက်ဆောင်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့လက်ဆောင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝန်ထမ်းများအတွက်လက်ဆောင်များတစ် ဦး ချင်းလက်ဆောင်များအားလပ်ရက်များအတွက်လက်ဆောင်တွေကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်များစျေးပေါပုံနှိပ်ခြင်းစျေးပေါသောပုံနှိပ်အမြဲတမ်းလိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်းတီရှပ်များပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်အဝတ်ပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်
5 /5(6မဲ )